Umbhede Ophakanyisiwe Wokhonkolo: Yebo Noma Cha? - Amaphrojekthi
Umbhede Ophakanyisiwe Wokhonkolo: Yebo Noma Cha?
Ukuhlelwa Nokulungiswa Kwemibhede
Ukunisela Woes System
Cabanga Ngosayizi Oyodinga
Ukufaka Ingadi Yakho Ephakanyisiwe Yengadi
Ukugcina Imibhede Yakho Ekhulisiwe
Kungumqondo omuhle ukubeka umbhede ophakanyisiwe kukhonkolo? Ngamafuphi, yebo… uma ukwenza kahle.
Ngenkathi abantu abaningi bekhetha ukubeka imibhede yabo ephakanyisiwe ngqo emhlabathini, abantu abaningi ngokwengeziwe bakhetha amagceke angemuva agandayiwe. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ezindaweni eziqashisayo, njengoba kulula ukuzinakekela futhi kungathuthukisi ukhula noma kudinga ukuvakashelwa njalo kokuhlelwa komhlaba.
Ukuthi igceke lakho linokhonkolo abaningi akusho ukuthi awukwazi ukulima kulo. Kodwa-ke, kunzima ukuqala. Ukhonkolo ungangcoliswa inhlabathi, ngakho-ke abaqashi kumele bathathe izinyathelo ezingezekile ukulungisa imibhede yabo. Amanzi angaba yinkinga futhi, ngakho-ke kubalulekile ukuhlela lokho kusengaphambili futhi.
Izinzuzo nazo zingadlula izingqinamba. Ngeke ube nokhula oluzungeze imibhede yakho yensimu ephakanyisiwe uma ikukhonkolo. Ukhonkolo futhi ungasiza inhlabathi ukuthi ifudumale ngokushesha entwasahlobo, inzuzo yangempela uma ufuna ukuqala ukutshala ukudla ekuqaleni konyaka. Ake sixoxe ngakho konke ongabhekana nakho ekwenzeni imibhede yakho yensimu ephakanyisiwe ibekwe ehlathini likakhonkolo egcekeni lakho!
Kungenzeka ngokuphelele ukubeka umbhede ophakanyisiwe kukhonkolo. Umthombo: Wikimedia Commons
Kunezinto ezimbalwa okudingeka uzicabangele ngaphambi kokuthi uqale. Lezi zimiso eziyisisekelo zisebenza kuzo zonke izingadi, kepha ikakhulukazi lezo ezizobekwa kuphedi likakhonkolo.
Yonke imibhede yensimu idinga ukufinyelela ekukhanyeni kwelanga, yize kuya ngokuthi uhlela ukubeka ini embhedeni, ungahle udinge ukukhanya kwelanga okuncane noma ngaphezulu. Qala ngokubuka igceke lakho ekuqaleni ukuze ubone ukuthi yiziphi izindawo ezinezingxenye zelanga eligcwele, eziyingxenye yelanga, futhi ikakhulukazi ezinomthunzi. Ngokuya ngokutholayo, manje usungahlela izindawo zokuqala zemibhede yakho.
Izikibha zabesifazane zokuvuna
Phansi kombhede kudinga ukuba endaweni eyisicaba. Lokhu kulula impela uma kukhonkolo, kepha uma kukhona ithambeka egcekeni lakho, lokho kuzoba inkomba lapho konke ukugeleza okuvela embhedeni kuzogelezela khona. Yazi kusengaphambili ukuthi kungenzeka yini ukuthi uhlanganise umswakama owedlulele kwenye indawo ebunzini. Indlela enokwethenjelwa yokuhlola lokhu kungaba ukuvula ipayipi ngokulambisa endaweni ecabangelayo, bese ubheka ukuthi amanzi aya kuphi.
Uma wakha imibhede ephakanyisiwe ngaphezulu kwamaphakethe, ungahle ube nezikhala phakathi kwamaphayiphu ngamanye. Qiniseka ukuthi ugcwalisa lezi zikhala ngesihlabathi noma olunye uhlobo lwento, ukuze nje uqinisekise ukuthi inhlabathi yakho yombhede ayibanjwa phakathi. Izimfanelo zenhlabathi ezincomekayo zingadala indawo enhle yokuhlala phakathi kwamaphayiphu wokuthuthuka kokhula, ngakho-ke ukuqinisekisa ukuthi uwagcwalisa ngokuthile okungakhangi kangako izimpande kuyisinqumo esihle.
Hlela futhi ngesikhala esihle phakathi kwemibhede yakho ephakanyisiwe lapho uyakha. Uzodinga ukuthola eyakho inqola yengadi noma ikiriva phakathi kwalezi ziqukathi ezinkulu zenhlabathi. Inketho enhle kakhulu ukunquma ububanzi banoma yini ezodinga ukuhamba phakathi kwemibhede bese ungeza cishe amasentimitha ayi-6-8 esikhala esingeqile kwalokho. Ngaleyo ndlela, lapho usebenzisa inqola yakho, ukujika okuqinile ngeke kukuncishe phakathi kwemibhede.
Ngokungafani nezinye izinhlelo zombhede eziphakanyisiwe, ukufaka uhlelo lokunisela ngokhonkolo ngokuvamile akuyona inketho. Uma ucabanga ngesilayidi esakhelwe ngokwezifiso, ungabeka uhlelo lwakho lokunisela kusengaphambili bese ulubeka ngaphezulu. Kodwa-ke, thina sonke kufanele sikhethe enye indlela.
Ukuqalisa uhlelo olulula lwe-PVC phakathi kwemibhede kuyindlela ongayikhetha, kepha kungaba yingozi ohambweni ngaphandle kokuthi uyigcine ingekho ezindleleni ezijwayelekile. Kukhona futhi inketho yokufaka amapayipi emibhedeni kukhonkolo, kepha lokhu futhi kungaba yingozi ohambweni ngaphandle uma uhlela ngokuhlakanipha. Uma kungenzeka, beka amapayipi akho okuchelela noma amapayipi endaweni eshushumbiswe kakhulu engadini yakho.
uwoyela omuhle wesikhumba esihlanganisiwe
Kukhona njalo inketho yokunisela ngesandla, futhi lokho kulula nje njengohlelo olwakhelwe ngaphakathi. Kodwa-ke, uma ungathanda ukusebenzisa uhlelo lwakho nge-timer ngenkathi useholideyini, ukwakha uhlelo lwamapayipi e-PVC ukuhambisa amanzi ohlelweni lokudonsa ukubheja kwakho okuhle kakhulu.
Embhedeni ongaphansi komhlaba, izitshalo ezikhulayo zinendawo eningi yokwandiswa kwezimpande. Okufanayo akunjalo nganoma yimuphi umbhede wakudala ophakanyisiwe kuphathio yakho. Ngihlala ngincoma ukukhetha umbhede wensimu ophakanyisiwe omude kunalokho obungalindela ukuwusebenzisa. Okuthile okufana ne- imibhede yensimbi engu-6-in-1 ende ku- Ikotishi, Isitolo sasekhaya nesengadi izosebenza kahle ukutshala ukudla, ngisho nasebusweni obuqinile, ngoba nje uzoba nokujula kwenhlabathi eningi futhi izimpande ngeke zihlangabezane ne-slab eqinile ezansi. Ungakhetha nokwakha umbhede omude wezinkuni.
Uma wakhela kuma-pavers, qiniseka ukuthi ugcwalisa izikhala noma ukhula lungakhula. Umthombo: symphonyoflove
Manje njengoba wenze ukuhlelela kusengaphambili imibhede yakho ephakanyisiwe, sekuyisikhathi sokuyilungisa. Kodwa-ke, inhlabathi yensimu ingabala izindawo ezinzima njenge-asphalt noma ukhonkolo. Ngokujabulisayo, ungasebenzisa amathuluzi ambalwa alula ukunciphisa ibala le-patio elibangelwa iziqukathi zakho ezinkulu.
Qala ngokubeka ifreyimu yombhede wakho ophakanyisiwe endaweni ebunjiwe. Uma ifreyimu yensimbi, kuwumqondo omuhle ukubeka i-geotextile noma indwangu yokwakheka komhlaba ngaphakathi kombhede ukuvimbela ukuvuza kwenhlabathi namabala obuso obugandayiwe. Ngamafreyimu enkuni, ungafaka indwangu yehadiwe ngaphakathi ukuze isebenze “njengephansi” lemeshi bese usetha indwangu ye-geotextile endaweni ngaphakathi kwalokho. Kunoma ikuphi, indwangu yokwakheka komhlaba kufanele ihambe okungenani isigamu phezulu ngaphakathi kombhede.
Gcwalisa ngokucophelela inhlabathi ngaphakathi kwendwangu ye-geotextile usebenzisa eyakho inhlanganisela yenhlabathi yombhede ephakanyisiwe lokuzikhethela. Uma usufinyelele phezulu kwendwangu, yimboze ngokucophelela futhi, njengoba isisindo somhlabathi okhona kufanele sigcine okuningi ekuhleni ezinhlangothini. Qhubeka ukwengeza inhlabathi uze ufike phezulu kombhede ophakanyisiwe noma ukuphakama lapho ungathanda ukuthi izinga lomhlabathi lime khona. Kungathatha inhlabathi eyengeziwe ukugcwalisa i- umbhede ophakanyisiwe omude .
Uma noma nini ngokuzayo kufanele umbe phansi embhedeni wakho, qikelela ukuthi ungahliki indwangu. Uma wenza ngengozi izimbobo ezimbalwa, i-patio yakho ingaqala ukuba namabala noma ibala. Ezimweni eziningi, ikhwalithi ingcindezi washer ungahlanza ibala, kepha futhi ungathola ukuvuza kwenhlabathi ngesikhathi sokudonsa nokuxazulula. Ungaphuma phezulu kombhede ngenhlabathi entsha, kepha kunzima ukuhlanganisa izimbobo.
Uma izimpande zakho zezitshalo zingajulile, umbhede omfishane ulungile.
Kubantu abatshala imibhede yensimu ephakanyisiwe engu-6-in-1, ukugcinwa kulula. Insimbi ehlanganisiwe ngeke igqwale, ngakho konke obekuzodingeka ukwenze ukuphuma phezulu ngomquba noma inhlabathi bese ukutshala.
Umbhede ophakanyiswe ngokhuni kufanele uhlale iminyaka eminingana uma ukhona ukwakha okwakho . Ngokuhamba kwesikhathi, ukhuni luzoqala kancane kancane ukukhombisa ubudala balo, futhi kungadingeka ukuthi ungene esikhundleni sebhodi lapha noma lapho uma kukhona ukubola okuqala ukwakheka. Gcina iso elibukhali embhedeni ukubona ukuthi kukhona yini ukubola okuqubukayo. Noma kwenzeka, kunesikhathi esincane ngaphambi kokuthi ushintshe izinkuni, ngakho-ke ngeke kube yinkinga ephuthumayo.
Kufanele ube nezitshalo ezikhulayo ngempumelelo emibhedeni yakho ephakanyisiwe inqobo nje uma umsele wamanzi ulungile futhi uhlala uwasusa futhi uwagcina. Faka amasentimitha ambalwa womquba noma umquba ohlanganiswe nomhlabathi okungenani kanye ngonyaka, futhi kufanele uzwe ukukhula okuhle kwezitshalo!
Izinhlobo Ezi-9 Zama-Pothos Okungezwe Kuqoqo Lakho
Ama-vibrator ama-G-spot amahle kakhulu angama-15 azokushiya uqhaqhazela
9 Izincwadi Ezishintsha Impilo, Ngokusho kweGlamour’s 2020 College Women of the Year
Nciphisa Izinsuku Ezingu-7 (Uzobe Usulungile Nge-Bikini-ngoMgqibelo!)
Kungani i-New Beauty Agency kaRihanna Ingashintsha Konke Ngezinwele Nokubumba
Izingubo zokugqoka ze-curvy
izinto ezahlukene okufanele uzenze ngesikhathi socansi
obhincisi bezingubo ezijulile
ukumbozwa okugcwele kuphakamisa ababhrasi